Izixhobo zokwenza izixhobo zokwenza izinto-K-Tek Machining Co., Ltd.
Imveliso ye-K-Tek yinkampani yobunjineli ekhokelayo, evelisa izinto ezichanekileyo ezichanekileyo kunye Iindibano ukuya kwimigangatho yomgangatho, kumashishini amaninzi anegugu lokugqwesa. Sisekele igama elingenakuthelekiswa nanto kwimveliso yobunjani obuphezulu, ubuchule obuphefumlelweyo, izisombululo ezingabizi mali, kunye nenkonzo yabathengi. Sidibanisa iinjineli ezinezakhono kunye namava ngezinto ezisemgangathweni, iinkqubo eziqinisekisiweyo zeshishini, iinkqubo zolawulo olungqongqo, kunye nezixhobo zikarhulumente kunye netekhnoloji.
Kwi-K-Tek machining injongo yethu kukunceda abathengi bethu bakhule. Senza oku ngokwazi ukuba yonke into esiyivelisayo ikumgangatho ophezulu kakhulu okhoyo kwintengiso namhlanje. Emva kwayo yonke loo nto, ufuna ukuba imveliso yakho yokugqibela ibe yeyona ilungileyo kwintengiso, akunjalo? Nxibelelana nathi ukuze ubone ukuba yintoni esinokuyenza ukuze wenze ngcono nangakumbi. "Kubalulekile kwishishini lethu ukuba sibe nabanikezeli abathembekileyo, abathembekileyo nabanolwazi abasixhasayo nabaxhasi bethu."
Inkampani yethu inokwenza imveliso yazo zonke iintlobo zamalungu oomatshini ngokuchaneka ngokweemfuno zabathengi, ngoku sinabasebenzi abangama-200. Imveliso yethu malunga neepesenti ezingama-20 zithunyelwa eJapan, i-60% ithunyelwe ngaphandle eYurophu naseMelika, sinokukunika umgangatho ophezulu kunye nexabiso lokukhuphisana. Izinto zethu eziqhelekileyo ziyintsimbi engenasici, i-aluminium, ubhedu, isinyithi esincinci, iiplastiki zobunjineli kunye nezinye iintlobo zensimbi ye-alloy, sinokubonelela ngonyango lokushisa kunye nonyango olwahlukeneyo lwabathengi:
• Ukuthambisa iZinc……)
Umsonto / umsantsa wemingxunya
Inkqubo yokulinganisa ngokuthe nkqo
Siqinisekile ukuba iqela lethu linezakhono kunye namandla okuvavanya kunye nokuhlola yonke imiba yokwenziwa kwezinto zobunjineli ukuqinisekisa ukuba sigcina imigangatho ephezulu njengebango labathengi bethu. Icandelo lokuhlola kunye nokuvavanya linoluhlu olubanzi lwezixhobo zolawulo lomgangatho kunye neendlela zokuphumeza oku kwaye sonwabile ukulungiselela naziphi na iinkqubo zovavanyo novavanyo ocinga ukuba ziyafuneka.
Injongo yethu: Ukuhambisa iimveliso ezifanelekileyo ezineziphene kubo bonke abathengi bethu. Sizimisele ukuhlangabezana nazo zonke iimfuno zoyilo lonke. Ukuzisa loo njongo ekufikeleleni, inkampani yethu ye-CNC Machining ngokuthe rhoqo iphucula umgangatho wazo zonke iinkonzo zethu kubathengi bangoku nabangomso. Sisebenzisa ezona zixhobo zethu zibalulekileyo-abantu bethu-ukuze baqonde kwaye baphucule iinkqubo zethu yonke imihla.
I-CMM: Umatshini wethu wokulinganisa we-ZEISS yi-CNC ilawulwa kwaye ithathe uhlolo lwayo ngokwenza uqhakamshelwano nenxalenye isebenzisa iprosesa yokuchukumisa .Le nkqubo isebenza kakuhle xa ujonga iindawo zelager kunye neempawu ezinzima ngaphakathi.